Eoropa Andrefana · Oktobra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Andrefana · Oktobra, 2012
Tantara mikasika ny Eoropa Andrefana tamin'ny Oktobra, 2012
Mandrisika ny Kazaka Hiteny ny Tenindrazany Ilay Mpihira Italiana
Azia Afovoany sy Kaokazy 24 Oktobra 2012
Nanjary nalaza tany Kazakstana i Son Pascal, mpihira Italiana sy mpamoron-kira, noho ny zotom-pony namporisika ny Kazaka hiteny ny tenindrazany. Manambara ny fitiavany ny zavatra Kazaka rehetra i Pascal tao amin'ny dinidinika fohifohy niarahana tamin'ny Global Voices Online.
Sainam-pirenena natsongoloky Ny Mpitondra Portiogey Nandritra Ny Fetim-pirenena
Paortiogaly 22 Oktobra 2012
Nanamarika Ilay fankalazana ofisialy ny faha-5 oktobra tao Portiogaly, fetim-pirenena nanaganana ny repoblika ny taona 1910, ny fihetsika miavaka sy azo atao hoe mampalahelo nataon'ny Filoha Cavaco Silva, raha nampitsongoloka tsy nahy ny sainam-pirenena.
Fahirano Ny Antenimera Portiogey: “Tsy Tetibolanay io”
Paortiogaly 20 Oktobra 2012
Nisy fahirano ny Antenimiera Portiogey [pt] nitranga tamin'ny 15 Oktobra 2012, andro ofisialy nametrahan'ny fitondrana Portiogey ny tetibolam-panjakana 2013 [pt] tamin'ny Filohan'ny Antenimiera. Gaga amin'ny tsy filazan'ny fahitalavitra amin'izy ity olo-tsotra mampita vaovao
Portiogaly: Kolontsai-Panoherana Tabataba Manerantany An-tSary
Paortiogaly 18 Oktobra 2012
Maka endrika ara-kolontsaina sy zavakanto ny hetsika Global Noise miaraka amin'ny veli-vilany nanerana ny tanandehibe 14 tany Portiogaly, tamin'ny 13 Oktobra, manaraka ny tigetra hoe "Sokiro ny troika! Ny Fiainanay no ilainay". Ao amin'ity lahatsoratra ity no hamorianay sary sy lahatsary notsongaina tamin'ny fihetsiketsehana.
Frantsa, Yemen: ny fomba ampanjavonàna tsikelikely ireo vehivavy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Oktobra 2012
Espaina: Mahazo Tombony Ny Banky, Maty Antoka Ny Vahoaka
Espaina 15 Oktobra 2012
Ny orinasa mpanao fandalinana Oliver Wyman, izay mandalina ny hamafin'ny fototra ho an'ireo banky lehibe espaniôla, dia namoaka ho fantatry ny rehetra ny famintinana avy aminy: mila 50.000 tapitrisa Euro ireo banky mba hialàn-dry zareo ao anatin'izao toerana ara-toekarena mananosarotra misy azy izao. Mandalina ny toe-draharaha i Lourdes Sada ary mitatitra ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra teny anaty aterineto.
Hetsika Kapoka Vilany Manerantany Kasaina Atao Ny 13 Oktobra
Espaina 12 Oktobra 2012
Antenaina hampangorintsina ny sofina mora mahare ny andro hikapokapohana vilany (lapoaly) hotontosaina manerantany amin'ny 13 Oktobra 2012. Ny fanentanana Global Noise [Tabataba Manerantany] dia karakarain'ireo fikambanana iraisampirenena ao amin'ny Occupy [Bodoy], Indignados, #YoSoy132, ary ireo hetsika mpandala ny rariny ara-tsosialy hafa ary sehatry ny mpikatroka avy amin'ny firenen-tsamihafa. Hotontosaina herintaona taorian'ny...
Tolo-Tanan'i Frantsa Sy Ny Banky Mondialy Hanampy Ny Firenena Afrikana Hahay Hifampiraharaha Amin'ny Harena An-kibon'ny Taniny
Afrika Mainty 10 Oktobra 2012
Ho fankalazana ny tsingerin-taona faha-40 ny fifanaraham-piaraha-miasa ao anatin'ny Faribola Franc, dia namoaka taratasy iraisana ny filohan'i Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sy ny minisitry ny vola Frantsay, Pierre Moscovici, hamaranana ny “fitrandrahana tafahoatra ny tahiry Afrikana” [fr]. Taorian'io kabary io dia namoaka fanambarana an-gazety ny Banky Mondialy fa nanangana tahirim-bola...
Frantsa : Olan'ny Fahazoan-dàlana Nanamaloka ny “Black Fashion Week”
Afrika Mainty 09 Oktobra 2012
Mba hanehoana amin'izao tontolo izao ny hamaroana lafy sy ny dindon'ny asa famoronana avy amin'ny tany afrikana eo amin'ny filatroana amin'izao fotoana, ilay Senegaly vavy mpampiakanjo, Adama Paris, dia niketrika ny "Black Fashion Week" (Herinandron'ny Haingo Mainty) izay natao tao Dakar (Sénégal) nandritra ny 10 taona. Ny andiany voalohany dia natao tany Prague tamin'ny Novambra 2011.
Hetsik'ireo Grika Mpandàla Ny Fanjakan'ny Baroa Manohitra Ny Fanavakavaham-bolonkoditra, Atao An-tsary
Gresy 09 Oktobra 2012
Natao tany afovoan-tananan'i Atena tamin'ny sabotsy 1 Septambra teo ny fihetsiketsehana manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra. Mpanao fihetsiketsehana anjatony maro, indrindra ireo mpandala ny fanjakan'ny baroa, no nivondrona hanohitra ny zava-nitranga niseho tato ho ato toy ny herisetra, izay mahafaty mihitsy aza, ny fanafihana atao amin'ireo mpifindra monina.